Ngwongwo kacha mma UV Laser BL-MUV-5W Manufacturer and Factory | Boln
1.Superior laser doo quality, ezi obere ntụpọ, na-enweta ọquụ marking mmetụta
Mpaghara a na-emetụta okpomọkụ dị obere ma na-enweghị mmetụta ọkụ. Ihe akara akara agaghị enwe ọdịdị ma kpọọ ya ọkụ
3.Quick marking ọsọ na elu na-arụ ọrụ arụmọrụ;
4.Marụ igwe niile kwụsiri ike na arụmọrụ, yana ike oriri na ogologo oge na-arụ ọrụ n'ịntanetị.
5.Edepụtara maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nrụpụta dị elu na-agbakwunye ihe niile achọrọ maka ntụkwasị obi na ike nke ụkpụrụ ụlọ ọrụ dị elu. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke isi mmalite laser na-enyere akara aka kpọmkwem na ebe dị iche iche.
6. Site na igwe nke ngwanrọ BOLN laser, data di omimi dika onu ogugu, onu ahia, koodu matriks data, aha ulo oru, otutu otutu, wdg.
7.Marking ọdịnaya gụnyere Oghere Usoro ọgụgụ, ụbọchị formats, oge stampụ, akpaka usoro n'usoro mmanya koodu ọgbọ na nanị otu click, zuru ma ọ bụ akara ederede, okirikiri ederede, 1-D na 2-D Koodu, ndịna-emeputa na foto, PDF akwụkwọ dị iche iche n'ígwé , faịlụ eserese (jpg, bmp, wdg), faịlụ DXF na PDFs nwere ihe dị iche iche;
8.N'ịtụle nchekwa dị mma, anyị na-eche ọ bụghị naanị nchekwa nke onye ọrụ na-ejikwa sel laser nke klas 2, kamakwa na ọ bụ naanị akụrụngwa dị elu ka ejiri ma ha na-akwado ya nke ọma na arụpụta kwa ụbọchị
Nke gara aga: Ofụri Esịt nchọ Laser akara Machine
Osote: CO2 laser marking igwe BL-MCO2-30W